Fifamindram-pahefana Andrasana ny fanatanterahana ny vina IEM sy ny velirano
MAY NY CNAPMAD
Kilan’ny afo ny efitra iray tao amin’ny orinasam-panjakana Cnapmad, tetsy Andranomahery, omaly maraina.
Tsy hametraka fitoriana intsony izahay, hoy ry zareo avy eo anivon’ny fikambanana MMV amin’ny resaka fifidianana eto amin’ny firenena satria leo an’ilay azo raisina fa tsy mitombina.
Nampiteny ny moana ny fitohanan'ny fifamoivoizana teto an-drenivohitra omaly.
MIARAMILA NIDOBOKA AM-PONJA
Tafiakatra 34 ny miaramila nidoboka am-ponja noho ny fanaovana heloka bevava nandritry ny hetsika fampandrian-tany nanerana ny nosy.
Vinavinaina ho amin’ny volana oktobra ho avy izao ny fifidianana ben’ny tanàna eto Madagasikara.
HALA-JAZA ENY AMBOHIBAO SY TALATAMATY
Mikorotan-tsaina tanteraka ny ray aman-dreny monina eny amin’ny manodidina an’Ambohibao sy Talatamaty ankehitriny.
NAMPIHINANA AKOHO VELONA
Nasaina nohanina velona ilay akoho. Izay no fitsaram-bahoaka nahazo ny tovolahy iray tetsy Andraisoro omaly.
Nisesisesy ny famindram-pahefana tamin’ireo minisitra taloha sy ireo vaovao voatendry omaly zoma 25 janoary.
Saika niompana tamin’ny ezaka hatao amin’ny fanatanterahana ny vina IEM sy ireo velirano avokoa ny ankamaroan’ny tenin’ireo minisitra handray ny toerana vaovao.
“Havadika ho asa mivaingana sy hita maso ny vina IEM sy ireo velirano. Maro ireo asa maro efa miandry ary tsy tokony hiandrasana ela intsony ny fanatanterahana ireny”, hoy ity minisitra vaovaon’ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy izay nisolo an-dRamatoa Christine Razanamahasoa
Nanambara ny minisitry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina teo aloha fa maro ny asa vita na dia governemanta hanomana fifidianana aza no nanomanana ny saina tamin’izany. Voadio kokoa ny orinasa Malagasy SECREN, ny orinasa SIRAMA sy SIRANALA efa mandeha amin’ny tokony ho izy. Ankoatr’izay dia voavaha ny sakana ny amin’ny tsy fahatanterahan’ny fifanatonan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Teo ihany koa ny famahana ny olan’ny seranan-tsambon’i Toamasina izay efa miverina tanteraka amin’ny laoniny. Nandimby ity minisitra ity moa ny minisitry ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana, Lantosoa Rakotomalala.
“Zava-dehibe ny fanohizana ny asa efa vita. Tsy tokony hanana ahiahy ny amin’ny fampiraisana ny minisiteran’ny toekarena, ny fitananam-bola sy ny tetibola ny vahoaka satria tanjona ny hanatrarana haingana ny vina sy ny veliranon’ny filoha. Na izany aza, ho sarotra ho an’ny firenena ihany ity taona 2019 ity satria mbola fanomanana no betsaka saingy hotohizana hatrany kosa ireo tetikasa iarahana amin’ny mpiara-miombon’antoko rehetra”. Ny minisitry ny toekarena sy ny teti-pivoarana Napetoke Marcel moa no nodimbiasany.
Nizotra tam-pilaminana ny fifamindram-pahefana